Waa Taariikh Fog Oo Facweyn Ee Akhbarti Zamaanka .. Boqoradi Bilqiisa Ee Reer Sab' Ee Ka Badbaadisay Nafteeda Iyo Qoomkeeda Burburki U La Damacsanaa Nabi Salemaan CS
Nabi Salemaan Maalin uu u dhaba galay arimaha shimbiraha ayuu ka dhex waayay Hud-Hud markaasuu yiri “oo sidee wax u jiraan Hud-Hud iima muuqdee,wallee wuu eedi amar la’aanta uu iska tagay hadaanu wax micno leh oo uu ku maqnaa ii keenin” .. Hud hud waa soo laabtay isaga oo warbixin basaasnimo ka sida boqortooyadii Balqiisa oo uusan nebi Suleymaan CS kaba war heyn.
Hud-Hud wuxuu nebi Suleymaan u sheegay inuu soo arkay naag boqorod ah oo wax kasta haysata oo xitaa leh sariir weyn oo ay ku seexato oo uu aad ula soo yaabay boqortooyada ay iyada iyo dadkeedu ku raaxaysanayaan .. Nebi Suleymaan CS si uu u hubiyo warka Hud-Hud keenay wuxuu u dhiibay warqad oo ku yiri u gee oo ka dibna ka soo laabo bal aan aragno waxa ay ku soo jawaabte.
Waxayna dadkeeda ka cod satay bal in ay kala taliyaan arintan waxa ay ka yeelayso. Markiiba dadkeedii oo ku kalsoon ilbaxnimada iyo awoodda ay haystaan waxay isku raaceen in ay u sheegaan in ay yihiin quwad xoog badan oo aan la handadi karin isla markaana ay diyaar u yihiin in ay is difaacaan kaliya ay iyada amarka dagaal galinta ka sugayaan .. Balqiisa oo ahayd boqorod fiiro dheer markiiba kuma ayan dag dagin dagaal galinta qoomkeeda oo waxaa umuuqday in wuxu yahay dagaal aan laysku halayn karin guusha.
Balqiisa oo ahayd haweeney indheer garad ah waxa ay markiiba ku qanacday in ciidanka awoodaas leh ee ay xitaa soo arkeen ergadii ay dirsatay aysan awoodin in ay iska caabiso sidaa darteed waxay door biday in ay fuliso amarka Suleymaan oo ay aaddo iyada iyo wafdi ay hogaaminayso .. Waxayna kursigeeda iyo mulkigeeda oo dhamaada ka door biday badbaadinta dadkeeda iyo in aysan sawab ugu noqon galinta dagaal ay ku riiqmaan oo salfada naftooda iyo maalkooda.
Wuxuu kaloo sameeyay arin uu kaga yaabsaday oo ah in uu diray tiknoolajiyo rabi ugu deeqay oo u keenta sariirteeda inta aysan soo gaarin halka uu nebi Sulaymaan cs ku sugayo iyada .. Kolkii ay usoo dhoweyd ee ay cagta soo saartay rooggii loo fidiyay ee soo dhoweynta ayuu nebi sulaymaan ka codsaday dadkii ag taagnaa in ay inkiraan oo aysan oga waramin arimaha sariirteedan laga soo hor mariyay.
Markay soo gaartay madashii marti soorka ayaa lagu yiri “tani sariirtaadii sow uma eka” waxay tiri “waaba iyada lafteedii malaha laakiin hore ayaanba u helnay yaqiin intii aan soo soconay oo hadda waxaanba nahay kuwo hogaansan” .. Balqiisa waxay ahayd qof caqli badan laakiin waxaa ka hor joogay inay ilaahay kaliya caabuddo qoomka ay ku dhex jirtay oo ahaa gaalo dhaqan soo jireen ah u leh in ay qorraxda caabudaan.
Markiiba balqiisa waxaa loo gudbiyay qasriga madaxtootadii nebi sulaymaan cs oo ahaa mid ku dul yiilay biyo dushooda oo ka samaysnaa muraayado aad loo qurxiyay .. Kolkay galaysay ayay xaydatay maryaha oo ay banaysay labadeeda kub iyada oo moodaysa in ay jiraan biyo ah ku dhex jirto.
Sidaas ayay Balqiisa nafteedii iyo tan qoomkeedii uga badbaadisay bur bur adduun iyo belaayo aakhiro kadib kolkii ay caqligeeda iyo xigmadeedii saraysay gaar-siisay iyadoo qof dumar ah inay ufekerto sidaa masuuliyadda ku jirto oo ay u maaraysay mixnadihii mulkigeeda ka hor yimi.